जिम्बाब्वे देखि विद्यार्थी - युक्रेनमा अध्ययन. युक्रेनी प्रवेश केन्द्र
जिम्बाब्वे देखि विद्यार्थी
जिम्बाब्वे देखि विद्यार्थी युक्रेन दक्षिण अफ्रीका मा दूतावास देखि आफ्नो भिसा प्राप्त गर्न. विद्यार्थी अनलाइन लागू गर्न सक्नुहुन्छ वा विरामी र भिसा प्रक्रिया को लागि जिम्बाब्वे हाम्रो स्थानीय प्रतिनिधि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ.
विद्यार्थी दक्षिण अफ्रिका सीधा जान सक्नुहुन्छ वा भिषा लागि हाम्रो प्रतिनिधिलाई आफ्नो सबै कागजात दिन सक्छ. हाम्रो प्रतिनिधि भिसा सँगै सबै विद्यार्थीहरू प्राप्त गर्न त्यहाँ जाने.
युक्रेनी दूतावास प्रिटोरिया मा स्थित छ, दक्षिण अफ्रिका.
अध्ययन भिसा लागि आवश्यक कागजातहरू छन्:
1. मूल पासपोर्ट (एक वर्षको लागि मान्य हुनुपर्छ)
2. छ राहदानी आकार फोटो (6 एक्स 4)
3. पूरा भरिएको आवेदन फारम (तपाईं यहाँ डाउनलोड गर्न सक्छन्)
4. युक्रेनी प्रवेश केन्द्र देखि मूल अध्ययन निमन्त्रणा
5. मूल एचआईभी-परीक्षण प्रमाणपत्र- (दूतावास यो कागजात अनुवाद गर्नेछ)
6. ग्रेड वा अंक मूल स्कूल प्रमाणपत्र (जाम्बिया या विदेश मामिला मन्त्रालय द्वारा attested गर्नुपर्छ Apostille छाप संग हुनुपर्छ) – (दूतावास अनुवाद र यो कागजात कानूनी रूप हुनेछ)
7. मूल जन्म प्रमाणपत्र (जाम्बिया को विदेशी मन्त्रालय द्वारा attested गर्नुपर्छ Apostille छाप साथ ORshould) – (दूतावास अनुवाद र यो कागजात कानूनी रूप हुनेछ)
8. आधिकारिक शरीर द्वारा प्रमाणित मूल मेडिकल परीक्षा प्रमाणपत्र (जिम्बाब्वे या विदेश मामिला मन्त्रालय द्वारा attested गर्नुपर्छ Apostille छाप संग हुनुपर्छ) – (दूतावास अनुवाद र यो कागजात कानूनी रूप हुनेछ)
भिषा विवरण शुल्क:
1. भिषा शुल्क: 680 रेण्ड
2. प्रत्येक कागजातको अनुवाद: 400 रेण्ड (4 हरेक विद्यार्थी लागि कागजात अनुवाद गर्नुपर्छ). युक्रेनी भाषा मा Transtion लागि कुल रकम: 1600 रेण्ड.
3. प्रत्येक कागजातको अनुवाद को प्रमाणीकरण: 400 रेण्ड (4 हरेक विद्यार्थी लागि कागजात अनुवाद गर्नुपर्छ). अनुवाद प्रमाणीकरणका लागि कुल रकम: 1600 रेण्ड.
4. प्रत्येक कागजातको Legalization: 400 रेण्ड (3 हरेक विद्यार्थी लागि कागजात अनुवाद गर्नुपर्छ). को Legalization लागि कुल रकम3कागजातहरू: 1200 रेण्ड.
5. हाम्रो प्रतिनिधि यात्रा शुल्क: 1620 रेण्ड.
युक्रेनी अध्ययन भिषा लागि कुल शुल्क: 6700 दक्षिण अफ्रीकी रेण्ड.
P.S.: जिम्बाब्वे को विद्यार्थी हामी मात्र हाम्रो विद्यार्थीहरूको लागि भिसा सेवाहरू व्यवस्था गर्ने निर्णय किन छ भनेर भिसा प्राप्त मा कठिनाइको धेरै सामना. अब विद्यार्थी समस्याहरूको सामना गर्न र सजिलै आफ्नो भिसा प्राप्त हुनेछ.